January 17, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 17, 2021
(Spain) 18 Jan 2021. Athletic Bilbao ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay koobka Spanish Super Cup, kaddid markii ay kaga adkaatay kooxda Barcelona 2-3, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Fir Park. Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Barcelona iyo Athletic Bilbao ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah. Daqiiqadii 40-aad Barcelona […]Sii akhriso
(Milano) 18 Jan 2021. Inter Milan ayaa garoonkeeda Giuseppe Meazza ku garaacday kooxda Juventus kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0 kulankii adkaa ee Derby d’Italia, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada Toddobaadkan ee horyaalka Talyaaniga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hor kaceysay kooxda Inter Milan. Daqiiqadii 12-aad Inter Milan Sii akhriso
(Manchester) 17 Jan 2021. Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Crystal Palace, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala natsay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Manchester City. Daqiiqadii 26-aad Manchester City […]Sii akhriso
(Spain) 17 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Barcelona iyo Athletic Bilbao ee Final-ka Spanish Super Cup ayaa la shaaciyey. Kooxaha Barcelona iyo Athletic Bilbao ayaa caawa isku qabanaya Final-ka Spanish Super Cup, iyadoo Tababare Ronald Koeman uu indhaha ku hayo inuu koobkiisii ugu horreeyey u gacan geliyo Blaugrana. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga […]Sii akhriso
(Milano) 17 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Inter Milan iyo Juventus. ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey. Kulan weyn oo horyaalka Serie A ayuu marti gelin doonaa caawa garoonka Giuseppe Meazza, waxaana uu dhexmari doonaa Inter Milan iyo Juventus. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha […]Sii akhriso
(Liverpool) 17 Jan 2021. Kooxaha Liverpool iyo Man United ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Anfield, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 0-0 ah, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd Isbuuca 18-aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayey labada kooxood Liverpool iyo Manchester United ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad ee […]Sii akhriso
(Manchester) 17 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester City iyo Crystal Palace ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Manchester City ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Crystal Palace si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo […]Sii akhriso
US military says its troop removal from Somalia is complete – KFVS
Somali News January 17, 2021
US military says its troop removal from Somalia is complete KFVSSii akhriso
Soomaaliya January 17, 2021
MUQDISHO-(SONNA)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen. Kulanka oo ahaa mid gaar ah ayaa looga hadlay dar-dargalinta hannaanka doorashooyinka, sugidda amniga iyo horumarinta deegaannada Hirshabeelle. Ra’iisul Sii akhriso
MUQDISHO-(SONNA)-Wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Mudane Hassan Hamza. Wasiir Jamaal IYO Danjire Hassan Hamza, ayaa ka wadda hadlay sidii loo xoojin lahaa xariirka iskaashi ee labada wadan ka dhaxeeya. Kulanka Sii akhriso